साथीहरूसँग घडी 53
हाम्रोबारे ︎ ︎
पुस्तकालय ︎ ︎
सोच र भाग्य
पुरुष र महिला र बच्चा
डेमोक्रेसी स्व-सरकार हो
चिठी र यसको प्रतीक
क्रम ︎ ︎
।। ︎ ︎
Word Word Foundation साइट खोज्नुहोस्
साथीहरूको साथ मोमेंटहरूको किस्तहरू खोज्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार, 1915, HW PERCIVAL द्वारा।
मित्रहरु संग आमाहरु।
चुम्बनवाद र गुरुत्वाकर्षणको बीच सम्बन्ध के हो, र तिनीहरू कसरी भिन्न हुन्छन् भने, यदि सबैमा? र चुम्बनवाद र पशु चुम्बकत्व को बीच सम्बन्ध के छ, र उनि कसरी फरक छ, सबै मा?
सकारात्मक विज्ञानले गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो भन्दैन, र यसलाई थाहा छैन भनेर स्वीकार गर्दछ। वैज्ञानिकहरूद्वारा अवलोकन गरिएका तथ्यहरूलाई यद्यपि गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ जुन छोटकरीमा भनिएको छ कि त्यहाँ एउटा पुल छ जुन शरीरको प्रत्येक शरीरमा यसको द्रव्यमानमा हुन्छ र पुलको शक्ति कम हुन्छ। शरीरहरु बीचको दूरी को वृद्धि र आफ्नो निकटता संग बढेको छ। तथ्यको क्रम, गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ, शरीरमा कणहरु को व्यवस्था को सम्मान बिना नै प्रदर्शित गर्दछ। सबै शारीरिक जनहरू, यसैले, एक अर्काप्रति गुरुत्वाकर्षण गर्न भनिन्छ।
चुम्बकत्व एक रहस्यमय शक्ति हो जुन प्रकृतिको बारेमा विज्ञानले अहिलेसम्म थोरै जानकारी दिएको छ, जबकि चुम्बकीय शक्तिले ल्याएका केही तथ्यहरू वैज्ञानिकहरूलाई राम्ररी थाहा छ। चुम्बकत्व भनेको बल हो जसले आफूलाई चुम्बकको माध्यमबाट देखाउँदछ। चुम्बक भनेको शरीर हो जहाँ सबै वा केहि कण ध्रुवीयता जस्तै हुन्छन्, र जहाँ कणहरूमा ध्रुव बीचको अक्षहरू समानान्तर हुन्छन्। कणहरूको सकारात्मक ध्रुवहरूले लगभग समानान्तर अक्षहरूको साथ एक दिशामा स point्केत गर्दछ, यी कणहरूका नकारात्मक ध्रुवहरूले विपरित दिशामा औंल्याउँछन्। शरीर एक चुंबक हो, कणहरु को विस्तार को लागी समानांतर वा लगभग समानान्तर अक्ष जस्तै polarity संग। एक चुंबक चुम्बकको रूपमा पूर्णतामा पुग्छ, यसको कणको संख्याको अनुपातमा जस्तै ध्रुवीयता र समानान्तर अक्षहरू छन्, कणको संख्याको तुलनामा जुन समानान्तर अक्षहरू छैन र ध्रुवीयता जस्तो छैन। चुम्बकत्व शरीरको मासको कणको अनुपात अनुसार शरीरको माध्यमबाट प्रकट हुन्छ जुन चुम्बकीय हुन्छ, जस्तै, ध्रुवीयता र समानान्तर समानान्तर। चुम्बकत्व विश्व मा जताततै उपस्थित एक शक्ति हो, तर तिनीहरूको कणहरु को चुम्बकीय व्यवस्था संग केवल शरीर मार्फत प्रकट। यो निर्जीव वस्तुहरूमा लागू हुन्छ।
उही शक्ति पशु शरीरमा एक उच्च शक्तिमा खडा गरिएको छ। पशु चुम्बकत्व भनेको पशुहरूको निकाय मार्फत बलको संचालन हो, जब शरीरहरू कुनै खास संरचनात्मक प्रकृतिका हुन्छन्। चुम्बकीय हुनु पर्ने बनावट यस्तो हुनुपर्दछ कि कोशिकामा भएका कणहरू र जनावरहरूको शरीरका कोषहरू संरचनाको हुन्छन् ताकि विश्वव्यापी चुम्बकीय शक्ति उनीहरूमा प्रवाह हुन्छ। यसको लागि संरचना निर्जीव म्याग्नेटमा जस्तै हुनुपर्छ। जनावरहरूको शरीरको अक्ष मेरुदण्ड हो, र कोषहरूका कणहरू मेरुदण्डको अनुरूप भाग र हड्डीहरूमा मज्जामा पign्क्तिबद्ध गर्दा समायोजन गरिएको बेला पशुहरूको शरीर चुम्बकीय हुन्छ। शरीरको ध्रुवहरूबाट कार्य तंत्रिका मार्फत हो। चुम्बकीय नुहाउने वा क्षेत्र शरीरको वरपरको वातावरण हुन्छ। कुनै पनि पशु निकायहरू यस क्षेत्रको प्रभाव भित्र आउँदछन्, सार्वभौमिक चुम्बकीय शक्तिको प्रभाव अनुभव गर्दछ जुन चुम्बकीय जनावरको शरीरबाट बग्दछ र यसलाई पशु चुम्बक भनिन्छ।
पशु चुम्बकत्व व्यक्तिगत चुम्बकत्व होईन, यद्यपि यसलाई उत्पादन गर्नमा व्यक्तिगत भाग हुन्छ जुन व्यक्तिगत चुम्बकत्व हो। पशु चुम्बकत्व सम्मोहन होइन, यद्यपि जनावरको चुम्बकत्व वाले व्यक्ति सम्मोहन प्रभाव उत्पन्न गर्न यसको प्रयोग गर्न सक्दछन्।
लिंगा शरीरा, वा शारीरिक शरीरको अदृश्य रूप, जीवनको लागि भण्डारण ब्याट्री हो। जीवन परिचालन गर्ने एक मोडमा चुम्बकत्व हो। यदि एक मानव शरीरमा लिंग शरीरा यसको भौतिक समकक्षहरु भने अनुसार बनाईएको छ, कि छ, चुम्बकीय पign्क्तिबद्ध मा कणहरु, तब यो जीवन पकड र भण्डारण गर्न सक्छन् र पशु चुम्बक भनिन्छ को पक्ष अन्तर्गत जीवन प्रसारित गर्न सक्छ।
प्रश्नको उत्तर यो हो कि वर्णन गरिएको अनुसार गुरुत्वाकर्षण र पशु चुम्बकत्व बीच कुनै सीधा सम्बन्ध छैन। यिनीहरूमा फरक छ, जहाँसम्म गुरुत्वाकर्षणसम्म, प्रत्येक द्रव्यमानले अरू द्रव्यहरूलाई तान्दछ, र गुरुत्वाकर्षण भनिने शक्ति जहिले पनि सक्रिय हुन्छ; तर पशु म्याग्नेटिजम भन्ने शक्तिले जहिले पनि कार्य गर्दैन, तर ती उदाहरणहरूमा मात्र सक्रिय हुन्छ जब त्यहाँ पशु संरचना हुन्छ, जसका विशेषताहरू कणहरूको ध्रुवीकरण र अक्षको सही वा अनुमानित समानता समान हुन्छन्।
पशु चुम्बकत्वले कसरी उपचार गर्छ?
पशु चुम्बकत्व एक सार्वभौमिक शक्ति हो जुन मानव शरीरको माध्यमबाट कार्य गर्दछ, जहाँ कोषहरूलाई ध्रुवीकरण गरिएको हुन्छ र निश्चित तरिकाले व्यवस्थित गरिएको हुन्छ, जुन ध्रुवीकरण र व्यवस्थाले विश्वव्यापी जीवनलाई शरीरमा प्रलोभित गर्छ र सीधै अर्को जनावरको शरीरमा जीवन हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ।
एक बिरामी शारीरिक शरीर एक हो जसलाई यसको कणहरूको उचित व्यवस्थाको अभाव हुन्छ, वा त्यो हो जहाँ जीवन प्रवाहमा अवरोधहरू छन्, वा जसमा सामान्य सास र जीवन परिसंचरणको अभावका कारण परिवर्तन भएको छ। धेरै जसो पशु म्याग्नेटिजम छ, र जसको माध्यमबाट जनावरको चुंबकत्व सजिलै सार्न सकिन्छ, अरुमा रोगहरू निको पार्न सक्छ। ऊ शारीरिक उपस्थिति बिना एक्लै आफ्नो उपस्थितिबाट निको हुन सक्छ, वा निको हुन को लागी शारीरिक सम्पर्क गरी ऊ निको हुन सक्छ। जब उपचार एक उपचार को उपस्थिति द्वारा गरिन्छ यो निको पार्ने वरपरको वातावरणमा बिरामीको घेरा लगाएर गरिन्छ। वातावरण एक चुंबकीय स्नान हो, सार्वभौमिक जीवनले पशु चुम्बकत्वको रूपमा कार्य गर्दछ। पशु चुम्बकत्व विश्वव्यापी जीवनको महान शक्तिको लागि एक गरीब नाम हो, तर हामी यसलाई समयको परिचित प्रयोगमा रहनको लागि यहाँ प्रयोग गर्छौं। स्नानले बिरामी व्यक्तिको वातावरणमा कार्य गर्दछ र यसमा विश्वव्यापी जीवन शक्तिको संचलनलाई पुनःस्थापन गर्दछ, अवरोधहरू हटाएर, रक्तसञ्चार पुनर्स्थापना गरेर, र कोषहरूमा अणुहरूको पुन: व्यवस्था गरेर, ताकि जीवन शक्ति निर्बाध प्रवाह र शरीरमा अ organs्गहरूलाई आफ्नो प्राकृतिक कार्यहरू प्रदर्शन गर्न अनुमति दिइन्छ।
पशुको चुम्बकत्वको माध्यमबाट निको पार्ने काम, जब उपचार गर्नेको शरीरको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट गरिन्छ, तब राम्रो हुन्छ जब निको पार्नेको हात शरीरमा वा सकारात्मक भागमा र नकारात्मक ध्रुवको रूपमा शरीरमा राखिएको हुन्छ। चुम्बकत्व शरीरको कुनै पनि भागबाट बाहिर निस्कन सक्छ, जस्तै आँखा, स्तनहरू, तर यसलाई प्रयोग गर्ने सबैभन्दा प्राकृतिक माध्यम हातहरू मार्फत हो। उपचारमा प्रभाव पार्नुमा महत्त्वपूर्ण विशेषता यो हो कि चale्गाइ गर्नेको दिमागले चुम्बकको प्रसारणमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सामान्यतया दिमागले असर पार्छ र उपचार प्रभावमा हस्तक्षेप गर्दछ, किनकि च often्गाइ गर्ने अक्सर यस्तो सोच्दछन् कि उसले आफ्नो दिमागबाट चुम्बकीय प्रवाहलाई निर्देशित गर्नुपर्दछ। हरेक मामलामा जहाँ चr्गाइकर्ताले उसको दिमागसँग चुम्बकत्वको सम्बन्धमा काम गर्दछ, उसले निको पार्ने कोसिस गर्दा उसले नोक्सान पुर्‍याउँछ, किनकि दिमागले ईलाजलाई असर गर्दैन, यद्यपि यसले चुम्बकीयतालाई प्रत्यक्ष र रंग दिन्छ। दिमागले हस्तक्षेप गर्दछ र चुम्बकत्वको प्राकृतिक कार्यलाई बाधा दिन्छ। दिमागले हस्तक्षेप नगरेमा चुम्बकीयता स्वाभाविक रूपमा कार्य गर्दछ। प्रकृति, र दिमागले होइन, उपचारलाई प्रभाव पार्छ। मानिसको दिमाग प्रकृति थाहा छैन, र शरीर मा जब आफैलाई थाहा छैन। यदि यो शरीरमा आफैलाई थाँहा थियो भने दिमाग प्रकृतिमा हस्तक्षेप गर्दैन।
एउटा साथी [HW Percival]
The Word Foundation, Inc. | को प्रकाशक सोच र भाग्य